Benzodent Cream (ဘန်ဇိုဒန်) - Hello Sayarwon
Benzodent Cream (ဘန်ဇိုဒန်)
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Benzodent Cream (ဘန်ဇိုဒန်)
Benzodent Cream (ဘန်ဇိုဒန်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Benzodent Cream (ဘန်ဇိုဒန်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Benzodent Cream (ဘန်ဇိုဒန်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
အံကပ်/သွားတုကြောင့် ဒါမှမဟုတ် သွားဖုံးနဲ့ ခံတွင်းတဝိုက်မှာ ထိခိုက်ဒါဏ်ရာရလို့ ဖြစ်ပေါ်ခံစားလာရတဲ့ သာမန်နာကျင်ခြင်းတွေကို ယာယီသက်သာသွားစေဖို့အတွက် Benzodent® ကို အဓိက အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။
Benzodent Cream (ဘန်ဇိုဒန်) ဘယ်လိုသုံးသင့်သလဲ
အဖုံးကို ဖွင့်ပါ။ ပြီးရင် အဖုံးမှာပါတဲ့ အချွန်လေးကို သုံးပြီး သတ္တုအပိတ်ကို ထိုးဖွင့်ပါ။
သွားဖုံးကို တိုက်ရိုက်ဆေးထည့်ပါ ဒါမှမဟုတ် နာနေတဲ့ သွားဖုံးနဲ့ ကပ်လျက်ထိတွေ့နေတဲ့ အံကပ်/သွားတုစွပ်တဲ့နေရာကို ဆေးထည့်ပါ။
တကယ်လို့ သင်ဟာ အံကပ်/သွားတုအသုံးပြုနေရတယ်ဆိုရင် မိနစ်အနည်းငယ်လောက် စောင့်ပြီးမှ အဆိုပါ အံကပ်/သွားတုကို ပြန်စွပ်ပါ။ အံကပ်ကို သွားဖုံးနဲ့ ကပ်နေအောင် အသုံးပြုရတဲ့ ကပ်ဆေးတွေကိုလည်း ဒီဆေးနဲ့ တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Benzodent Cream (ဘန်ဇိုဒန်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Benzodent® ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Benzodent® ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Benzodent® ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။)
Benzodent® ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Benzodent® ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Benzodent Cream (ဘန်ဇိုဒန်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
အောက်ပါအချက်တွေ ရှိနေရင် သင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
သင့်မှာ ကိုယ်ဝန်ရှိနေခြင်း သို့မဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေခြင်း။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီလို အခြေအနေတွေမှာ ဆရာဝန် ညွှန်ကြားထားတဲ့ ဆေးဝါးတွေကိုပဲ သုံးစွဲသင့်တဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
အခြားသော ဆေးဝါးတွေကို သုံးစွဲနေရခြင်း။ အခြားသော ဆေးဝါးတွေ ဆိုရာမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မလိုဘဲ အလွယ်တကူ ဝယ်ယူသုံးစွဲနိုင်တဲ့ ဆေးဖက်ဝင်သဘာဝအပင်တွေ၊ဖြည့်စွက်အားဆေးတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
Benzodent® သို့မဟုတ် အခြားသော ဆေးဝါးများနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်း။
ဆီးချို၊သွေးကြောဆိုင်ရာ ပြဿနာများ၊အရေပြား ဓါတ်မတည့်မှုများ၊သွေးအားနည်းရောဂါ၊ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ၊
လေပြွန်ရောင်ရောဂါ၊အဆုတ်တွင်းရှိ လေအိတ်ကလေးများ ကပ်ခဲသောရောဂါ၊နှလုံးရောဂါ၊
ဆေးထည့်မည့် နေရာတွင် ပိုးဝင်ခြင်း၊ကြီးကြီးမားမား အနာရှိခြင်း၊အရေပြားပေါက်ပြဲနေခြင်း၊ဆေးထည့်မည့်နေရာတွင် ထိခိုက်ဒါဏ်ရာ ရထားခြင်း စတဲ့ အခြားသော ပြဿနာတွေ ရှိနေခြင်း။
ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူချိန်၊ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Benzodent Cream (ဘန်ဇိုဒန်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ခွဲစိတ်ကုသမှု မခံယူခင်မှာ သင်လက်ရှိသုံးစွဲနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံး(ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့ဆေး၊မိမိဖာသာ သုံးစွဲနေတဲ့ဆေး၊သဘာဝဆေးဖက်ဝင်ဆေး စသဖြင့်)အကြောင်းကို ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် သွားဆရာဝန်ကို ကြိုတင်အသိပေးပါ။
ယခုဆေးဝါးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင် အသုံးပြုလျှင် ဆိုးကျိုးများရှိမရှိကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် လုံလောက်သော လေ့လာစမ်းသပ်ချက်များမရှိပါ။ ဆေးမသောက်သုံးမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကို ချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။ ယခုဆေးဝါးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် C ရှိသည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။)
ဒီဆေးကို နို့ရည်မှတဆင့် စွန့်ပစ်မှုရှိမရှိ သေချာစွာ မသိရသေးတဲ့အတွက် သတိထားပြီး သုံးစွဲသင့်ပါတယ်။
Benzodent Cream (ဘန်ဇိုဒန်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
Benzodent® ဟာ အောက်ဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို ဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်ပါတယ်။
· အနည်းငယ် ပူစပ်နာကျင်ခြင်း သို့မဟုတ် ယားယံခြင်း။
· အဖြူရောင် ခပ်ခြောက်ခြောက်အဖတ်လေးများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း။
အောက်ဖော်ပြပါ လက္ခဏာတွေ ပေါ်ပေါက်လာရင်တော့ ဆေးအသုံးပြုခြင်းကို ရပ်ပြီး ဆရာဝန်နဲ့ ပြသပါ။
· ပြင်းထန်စွာ ပူစပ်နာကျင်ခြင်း။ ဓါတ်မတည့်ခြင်း။
· အရည်ကြည်ဖုထခြင်း၊ဖောင်းလာခြင်း၊ကူးစက်ပိုးဝင်သည့် လက္ခဏာများ ပေါ်ပေါက်လာခြင်း။
· ဓါတ်မတည့်လက္ခဏာများ ခံစားလာရခြင်း ဥပမာ အနီစက်များ၊အင်ပြင်များထွက်ခြင်း၊ယားယံခြင်း/ရောင်ရမ်းခြင်း (အထူးသဖြင့် မျက်နှာ/လျှာ/လည်ချောင်းတို့တွင်)၊အလွန်အမင်း ငိုက်မျဉ်းခြင်း၊အသက်ရှုရခက်လာခြင်း။
အောက်ဖော်ပြပါ လက္ခဏာတွေ ပေါ်ပေါက်လာရင် အရေးပေါ်ဆေးဝါးကုသမှု ခံယူရပါမယ်။
· အရေပြား/နှုတ်ခမ်း/လက်သည်းတို့ ဖြူဖျော့ခြင်း၊ပြာနှမ်းခြင်း သို့မဟုတ် မီးခိုးရောင်သမ်းခြင်း။
ယခုဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ခံစားရမှုမှာ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ အထက်ဖော်ပြပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင် မပါဝင်သည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိပါက သင်၏ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ပါ။)
ဘယ်ဆေးတွေက Benzodent Cream (ဘန်ဇိုဒန်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Benzodent® ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။)
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Benzodent Cream (ဘန်ဇိုဒန်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Benzodent® က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Benzodent Cream (ဘန်ဇိုဒန်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ခံတွင်းနှင့် သွားဖုံးဆိုင်ရာ နာကျင်ခြင်းများအတွက် : လိုအပ်သလို သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။ တနေ့ကို အများဆုံးလေးကြိမ်အထိ သို့မဟုတ် သွားဆရာဝန်/ဆရာဝန် ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်း သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။
သွားနှင့် ပတ်သက်သော နာကျင်ခြင်းများအတွက် : လိုအပ်သလို သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။ တနေ့ကို အများဆုံးလေးကြိမ်အထိ သို့မဟုတ် သွားဆရာဝန်/ဆရာဝန် ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်း သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။
ကလေးတွေအတွက် Benzodent Cream (ဘန်ဇိုဒန်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
၂နှစ်အောက် ကလေးလူနာများမှာ ဘယ်လောက်အချိုးအစားပေးရမလဲဆိုတာ အတည်မပြုရသေးပါ။ သင့်ကလေးငယ်အတွက် သောက်သုံးရန် စိတ်ချရမှုရှိချင်မှရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်ဆေးဝါးမဆို အသုံးမပြုရသေးခင်မှာ စိတ်ချရမှုအနေအထားကို အပြည့်အဝနားလည်ဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အချက်အလက်များ ထပ်မံရရှိရန်အတွက် သင့်ရဲ့ ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Benzodent Cream (ဘန်ဇိုဒန်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Benzodent® ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Benzocaine Benzodent® ၇ ဂရမ်: ၂၀% Benzocaine.
Benzodent® ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 16, 2018 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း မတ် 27, 2018
Benzocaine topical application route. http://www.mayoclinic.org/drugs-
supplements/benzocaine-topical- application-route/side- effects/drg-20072913. Accessed
4c82c94d5255. Accessed October 15, 2016.
Benzocaine topical. http://www.webmd.com/drugs/2/drug-6069/benzocaine-
topical/details#precautions. Accessed October 15, 2016.
Benzocaine topical. https://www.drugs.com/mtm/benzocaine-topical.html. Accessed
Benzocaine. http://reference.medscape.com/drug/benzocaine-343361#6. Accessed